Dhallinyarada ka soo baxay jaamacadaha oo farsamada gacanta baranaya si ay shaqooyin u helaan - Radio Ergo
Dhallinyarada ka soo baxay jaamacadaha oo farsamada gacanta baranaya si ay shaqooyin u helaan
Ardeyda dugsiga farsamada gacanta Buruuj oo tababbar ku jira/Rijaal Cabdi Maxamed/Ergo
(ERGO) – Maxamed Kaafi Cali oo ka qalin-jebiyay heerka koowaad ee jaamacadda Soomaaliya waxuu shaqadiisii ugu horreysay helay dhamaadkii 2019-kii, kaddib markii uu bartay xirfadda farsamada gacanta.
Shahaadadiisa maamulka ganacsiga, oo uu sanadkii 2017 ka kasbaday Jaamacadda Soomaaliya, wax albaab ah uma furin. Wuxuu iska diwaangeliyay dugsiga tababarka xirfadda ee Buruuj halkaasi oo uu ka bartay farsamada korontada, cilladbixinta qaboojiyeyaasha, dabka baabuurta iyo makaanikada. Wuxuu hadda bishii helaa lacag dhan $300 oo uu ku dabbaro nolosha qoyskiisa.
Sababta ku qasabtay in uu ku dhiirrado barashada farsamada gacanta waa inuu arkay in loo-shaqeeyayaashu ay doorbidaan dadka isku darsaday xirfadda iyo aqoonta jaamacadda.
“Markii aan dhameeyay jaamacadda, shahaadadii jaamacadda dhowr meel ayaan la tagay waana ii suurtagali weysay in aan shaqo helo. Dhanka wasaaradaha waad ogtahay waxay noqdeen garab, shaqada ay qaban karaan dadka waxbartay waxay iska noqotay wax yar oo tiris ah, taasina waxay igu qabsatay in aan noqdo qof xooggiisa maalaya,” ayuu yiri Maxamed.
Wuxuu sheegay in waalidiintiisa ay ku dhiirigaliyeen in uu ku biiro iskuulka la isku baro farsamada gacanta, ayna ka bixiyeen lacagta lagu dhiginaayay oo bishii ahayd 20 doollar muddo toddobbo bil ah.
Maxamed ayaa kula taliyay dhallinyarada waxbaratay ee jaamiciyiinta ah in ay ku biiraan dugsiyada farsamada gacanta si shirkadaha wax-soo-saarka ay shaqo uga helaan ama ay xooggooda ugu shaqeystaan oo meel ay furtaan, intii ay sugi lahaayeen shaqo aqoontooda u aqalanta.
“Dadka jaamiciga ah ee farsamada gacanta yaqaanna ma badna, haddii uu jirana cidda uu u shaqeeyo ayaa ilaashata. Aniga naftayda anigoo aan wali qalin jabin ayaa shaqo la ii soo bandhigay.”
Qaar ka tirsan ardayda baratay farsamada gacanta ee jaamiciyiinta ah ayaa furtay xarumo u gaar ah oo ay ku shaqeystaan taasi oo ay shaqo kasii heleen dhalinyaro kale oo muruqmaal ah.
Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo bartay cilmiga dhaqaalaha wuxuu furtay xarun u gaar ah oo lagu cillad-bixiyo korontada, diishashka iyo qaboojiyeyaasha, kaddib markii ay waalidkiis siiyeen $1,000. Waxaa hadda la shaqeysa toddobbo dhallinyaro ah oo uu isaga shaqada ku tababaray.
Maxamed oo ah aabbaha labo carruur ah waxaa uu ku biiray dugsiga farsamada gacanta ee Buruuj sanadkii 2018-kii, labo sano kaddib markii uu ka qalin-jebiyay jaamacadda Muqdisho.
“Xafiis walba oo aan tagay shaqo waan ka soo waayay, kaddib ayaan go’aansaday in aan xooggeyga ku shaqeysto, taasina waxay igu qasabtay in aan barto farsamada gacanta,” ayuu yiri.
Wuxuu aaminsan yahay in uusan gaari lahayn halka uu maanta joogo haddii uu ku mashquuli lahaa raadinta shaqo u qalanta cilmigiisa jaamacadeed.
Maxamed ayaa xusay in uu ogaa in xirfadda uu soo bartay uu ka heli karo lacag fiican haddii meel u gaar ah uu furto.
“Hadda aniga biil wanaagsan ayaan ka helaa oo aan ku maareeyo noloshayda iyo tan qoyskeygaba. Sidoo kale dhallinyarta ila shaqeysa naftooda biil wanaagsan ayay ka helaan.”
Magaalada Muqdisho waxaa ku yaalla dhowr dugsi oo farsamada gacanta lagu baro dadka aan weligood wax baran iyo ardayda ka soo baxa dugsiyada dhexe iyo sare ee doonaya inay xooggooda ku shaqeystaan. Balse, Buruuj ayaa diyaariyay fasallo u gaar ah ardeyda jaamacadaha dhigta iyo kuwa soo dhameeyay.
Cabdirisaaq Maxamed Cabdirashiid, madaxa arrimaha ardeyda ee Buruuj ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in sababta ay u sameeyeen qeybta u gaarka ah ardayda jaamacadaha in ay tahay inay daboolaan baahida kuwa doonaya inay bartaan xirfadaha farsamada si ay shaqooyin u helaan.
Wuxuu xusay in 314 arday oo wax ka baratay iskuulka afartii sano ee la soo dhaafay ay hadda shaqeynayaan. Iskuulka ayaa ku xiran shirkado kala duwan oo dalka gudihiisa ku yaalla, kuwaasi oo soo dalbada ardayda qaar iyagoo wali dhiganaya iskuulka.
Banaadir: Xarun cunno, waxbarasho iyo hoy siisa konton carruur ah oo agoon ah